Semalt: Indlela yokusebenzisa iCrawlboard Web Extraction Platform
nge Internet. Ukuba ufuna kuphela ukukhupha inani elincinane lwedatha, abaqeqeshi banokukunceda. Kodwa ukuba ufuna ukukhipha umthamo omkhulu weedatha rhoqo, kufuneka uqeshe inkampani ye-third party ye-scraping company. I-Crawlboard ingomnye wabanikezeli beenkonzo ezinjalo, kwaye abaninzi abantu baye basebenzisela umsebenzi wabo wokukhangela web. Iqonga lisebenza kakuhle. Ngoko ke, kunconywa kubantu abafuna ukukhangela inani elikhulu leenkcukacha rhoqo.
Ngaphandle kobuchule bayo, kulula ukuyisebenzisa. Amanyathelo alula afunekayo ukwenza ukusetyenziswa kweqonga sele ichazwe apha.
Yiya kwi-CrawlBoard iphepha lokucela ukucoca ngewebhu ngokuchofoza olu qhagamshelo. Gcwalisa ifom yobhaliso ngokufanelekileyo. Kukho imimandla yegama lokuqala, igama lokugqibela, idilesi ye-imeyili yenkampani, kunye nendima yomsebenzi. Xa usuphelile, nqakraza iqhosha lokungena ngemvume. Imeyili ngokuzenzekelayo izothunyelwa kwidilesi ye-imeyile oyinikezele ukuqinisekiswa. Vula i-imeyile uze uklikha kwikhonkco lokuqinisekisa ukuvula i-akhawunti yakho entsha ye-CrawlBoard. I-2:
Injongo ephambili yale nyathelo ukuongeza isayithi ukukhwela, kodwa kufuneka uqale udale i-groupgroup. I-sitegroup liqela lamaziko aneesakhiwo esifanayo. Le yenzelwe abantu abadla ukuba bahlule idatha kwiindawo ezininzi ngelo xesha.
Ukwenza iqela leqela, nqakraza "Yakha unxibelelwano olutsha lweqela". Itholakala kwicala lasekunene lebhokisi lokukhetha ye-Sitegroup. Emva koko, ngoku ungongeza zonke iisayithi ezisemagqabini enkampani emva komnye ngokuchofoza kwi-Hlanganisa isikhonkwane esisekhoneni eliphezulu lasekunene kwephepha. Emva koko, khetha iisayithi enye enye.
Yiya kwiwindow yokudala yesikhwama ukuze unikezele igama elikhethekileyo kwiqela lakho lewebhu. Khumbula ukuba zonke iisayithi kwi-groupgroup kufuneka zibe nesakhiwo esifanayo ngenye indlela, awukwazi ukufumana umxholo ochanileyo.
Ukuqonda ukubaluleka kweqela le-site, thabatha iisayithi zokubonisa uluhlu ngokomzekelo. Ukuba umsebenzi oceliwe ukukrazula imisebenzi ukusuka kwiibhodi zamsebenzi, ngoko uya kudala ukudala iqela le-site ukuze lifanisane nomsebenzi kunye nazo zonke iisayithi kwi-sitegroup ziya kuba zizahlu.
Ngokweemfuno ezifunekayo kule khredithi, kufuneka ukhethe ubukhulu benkcazelo yedatha, ifomathi yokuhambisa kunye nendlela yokuhanjiswa. Ii-Frequencies zokurhweba idatha imihla ngemihla, ngeveki, ngenyanga kunye nesiko.
Kwifomathi yokuhambisa, ungakhetha enye phakathi kwe-XML, i-JSON, ne-CSV. Yaye ngokulungiselela indlela, kufuneka ukhethe phakathi kwe-FTP, iDropbox, i-Amazon S3, kunye ne-REEST API.
Iskrini senzelwe ulwazi olongezelelweyo. Kungenxa yabasebenzisi ukuchaza umsebenzi wabo wokukrazula ngewebhu. Nangona kubalulekile, kubalulekile ukubandakanya ulwazi olongezelelweyo kuba xa uchaza ngakumbi umsebenzi wakho, umniki-nkonzo uya kuqonda ngokuqinisekileyo oko uyifunayo, kwaye iya kuvelisa umphumo ongcono.
Unokucela kwakhona ezinye iinkonzo ezongezelelweyo zentengiso kule sikrini. Abanye babo baHlomelo lwe-indexing, iFayile yokudibanisa, ukulandwa kwezithombe, kunye nokuhanjiswa kwe-Expedited.
Lapha, kufuneka ucofe kwi "iqhosha lokuthumela". Injongo ngumboneleli wenkonzo ukujonga ukuba umsebenzi wakho uyasebenza. Uza kufumana i-imeyile ekukwazisa ukuba umsebenzi wakho unokwenzeka okanye awukho. Ukuba kunjalo, ngoku ungaya kwaye uhlawule. Xa ukuhlawulwa kwakho kuqinisekisiwe, iqela le-CrawlBoard liya kuphendukela kwisenzo.
Emva kokuhlawula, kufuneka ukuba ulindele kuphela iimveliso zakho zeefomati kwifom echazwe nguwe, ngendlela ekhethiweyo yokuhambisa Source .